Kuthiwani uma idola liwa kakhulu? | Ezezimali Zomnotho
Kuthiwani uma idola liwa kakhulu?
Omunye wemiphumela yezinqubomgomo zezomnotho nezezezimali zikamongameli omusha wase-United States, Donald Trump, ukuthi imali yayo, okungukuthi, idola laseMelika, ingehla ezinyangeni ezizayo. Ngaphezu kwalokho, abahlaziyi abaningi baya phambili ngokubikezela ukuthi lokhu kuyiqiniso langempela lokuthi abatshalizimali abancane nabaphakathi kuzodingeka bathembele ekwenzeni iphothifoliyo yabo yokutshala imali. Kuze kube sezingeni elizonquma ukubuyiselwa kwakho.
Ngoba empeleni, idola elibuthakathaka linemiphumela eminingi, hhayi emnothweni nje jikelele, kepha futhi nakwizintshisekelo zakho njengomtshali-zimali. Akukhawulelwanga ekuthengweni nasekuthengisweni kwe- amasheya ezimali, uma kungenjalo kwezinye izimakethe zezimali ezihlukile. Eminye ingeyasekuqaleni impela, njengaleyo yezinsimbi eziyigugu. Yize kunjalo, kuzoba yindawo yemali lapho bezobona kakhulu ukuguquguquka kwezinguquko phakathi kwezimali ezinenkontileka enkulu ngabasebenza.
Uma ufuna ukwazi ukuthi kuzokwenzekani ezimakethe nge ukwehla kwedolaAkukho okungcono kunezeluleko ezithile ezizokusiza ukuthi uhambise imisebenzi yakho ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Akukhona ukuthi kuyisimo esingenangqondo impela, kepha kungenzeka kube yiso esenzeka ngokoqobo. Kunoma ikuphi, kuzokulethela amathuba amasha ebhizinisi, amanye awo athakazelisa impela futhi ngandlela thile asungulile. Ukusuka ezimakethe ezisafufusa kuya kwezinye izimali. Ngamafuphi, izinhlobo ezintsha zokutshala imali zikuvulela kusuka manje.
1 I-dollar: ingabe iyathinta izimakethe?
2 Amazwe asafufusa angakhuphuka
3 Ukuvela kwemali yaseNyakatho Melika
4 Abanye abawine idola eliphansi
5 Ukusebenza ezimakethe zezezimali
I-dollar: ingabe iyathinta izimakethe?
Isimo semali yaseNyakatho Melika ekukhuphukeni kuzosho ushintsho olukhulu kumasu akho okutshala imali kusukela ekuqaleni. Kuzoba yisikhathi esifanele sokuvala izikhundla kwezinye zazo futhi zivule kwabanye. Ngoba empeleni, amazinga wamandla azohluka ngamandla amakhulu. Ukufika lapho bekungamukelwa khona otshalweni lwakho, kusukela manje kuzoba njalo. Kufanele ukhombise ukushesha okukhulu ukulindela imicimbi futhi ngale ndlela ungenza ukonga kwakho kuzuze ngamandla amakhulu.
Ngoba uma idola liwa kakhulu, kuzobe sekuyisikhathi sokuthi ubheke izimakethe ezisafufusa. Esinye seziphakamiso ezisikisela kakhulu, yize kunengozi ethile, kusekelwe ekwandiseni ukuvezwa kwakho kumasheya aseRussia. Kubonakala sengathi kungenzeka enye yezimanga ezinhle kwalolu hlelo olusha lwemakethe yamasheya. Akumangalisi ukuthi izinkomba zezomnotho eziyinhloko zibonisa lokhu. Ukuze kufike isikhathi sokuthi uqale lesi simo esisha ebudlelwaneni bakho nezwe lemali ngokusebenza kwakho kokuqala.
Elinye lamaqiniso elisekela le nketho entsha ekutshalweni kwemali ukuthi intengo kawoyela lizoqhubeka nokukhuphuka kulo nyaka. Ngisho nangamandla angajwayelekile, njengoba abanye abahlaziyi abadumile bezimakethe zezimali bevuma. Uma kunjalo, izovuna umnotho wamaSlavic ngenxa yokuncika kwayo kakhulu egolide elimnyama. Lapho imakethe yamasheya yaseRussia ingathatha khona lesi simo esisha sezomnotho ngokukhuphuka okunamandla. Ngokunikezwe lokhu, ungavula izikhundla kule makethe yokulingana yamazwe omhlaba.
La Umnotho waseRussia Kukushayile obekulindelwe ngabahlaziyi, ukuwa kuka-0,5% bekulindelekile kanti ekugcineni bekungu -0,2% kanti ukukhula kulindeleke kulo nyaka. Le mininingwane isekela umkhuba ongaba ngenye yezimpahla zezimali okufanele uzicabangele kulo nyaka. Ngamathuba wangempela ekubuyekezweni kwawo nangamandla okukhula abaluleke kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izimakethe zendabuko.
Amazwe asafufusa angakhuphuka
Akuyona iRussia kuphela isizwe esingahlomula kulesi simo esisha somnotho. Futhi amanye amazwe asafufusa anesisindo esithile ebhodini lezomnotho lamazwe omhlaba. Enye yazo ngokungangabazeki Brasil, uma izuza ukuzinza kohlelo lwayo lwezepolitiki. Ngamandla wokubuyekeza aphakeme kakhulu nangaphezulu kwalokhu okwethulwe ezinye izimakethe zamasheya. Ngenye indawo lapho imali yakho ingaqondiswa ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Azikho engcupheni ekudalweni okwenziwa kube semthethweni kusukela manje kuqhubeke.
Eminye iminotho yamazwe omhlaba engasebenzisa leli thuba ifaka eminye evela eSoutheast Asia kanye ikakhulukazi amaLatin America. Bangakunika ukumangala okungaphezu kokukodwa okuhle ngalezi zikhathi. Futhi awukwazi ukukhohlwa ngemakethe yamasheya eNdiya, osekuphele izinyanga ezimbalwa ibhekene nenye yezinzuzo ezinhle kakhulu emalini emhlabeni. Ngaphezulu kwezimakethe ezinkulu zamasheya ezisezingqondweni zabatshalizimali abakhulu.
Ukuvela kwemali yaseNyakatho Melika
Zonke lezi zindlela zokutshalwa kwemali zingenzeka noma nini lapho lokhu kuhlangana kwamandla kwenziwa phakathi kwezimali eziholayo ze-oda lezimali zomhlaba jikelele. Ngoba empeleni, konke kubonakala kuhamba ngalolo hlangothi. Kuze kube seqophelweni lokuthi konke kukhombisa ukuthi idola izoqhubeka ukwehla ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Ngokushintsha kwephothifoliyo yokutshala imali okufanele uyenze kusuka manje.
Ngale ndlela, imakethe yezimali izoba ngenye yezimpahla zezimali okufanele uzinake kakhulu phakathi kwamasonto azayo noma ngisho nezinyanga. Izokhombisa umsebenzi ongaphezu kokujwayelekile. Ngokushintshashintsha okungaphezu kokumangazayo okuzojabulisa i abahwebi. Uma ungomunye wabo, siyakuhalalisela ngoba kuvulwa isikhathi esisha esigcwele imizwa enamandla kakhulu nezinketho ezinhle zokwenza imisebenzi yakho izuze kule makethe yezezimali efaneleke kangako.
Ngaphezu kwakho konke, kufanele ube imisebenzi eshesha kakhulu oyenza ibe semthethweni ezimakethe zezezimali. Ngokushintshana nezinye izimali zokubaluleka okukhethekile: I-franc yaseSwitzerland, iphawundi laseBrithani noma i-euro uqobo. Njengomphumela walezi zenzo, uzokwazi ukubeka noma yiluphi uhlobo lwesiphakamiso. Kusukela kokulondolozwa kakhulu kuya kokunolaka kakhulu ezimakethe zezezimali. Vele, ngeke ube nemikhawulo ezindleleni zakho.
Abanye abawine idola eliphansi
Kodwa-ke, ukuwa okuqhubekayo kwemali yase-United States kuletha abanye abawinile ngokwezimpahla zezimali lapho ungatshala khona imali oyilondolozile. Imakethe ye- izinsimbi eziyigugu Kuzoba ngomunye wabo futhi wethulwe ngaphansi kweziphakamiso ezahlukahlukene zokutshala imali. Kusuka egolide elijwayelekile kuya kwezinye izinsimbi ezingavamile kakhulu, njenge-silver noma i-palladium. Akhiwe njengenye yezindlela ongakhetha kuzo onazo kusukela manje ngesimo sedola esisha.
Enye yezinsika ezimelwe yintengo kawoyela ezimakethe. Ngoba ngokungangabazeki izoba ngenye yezimpahla zezezimali ezingathola ukwazisa okukhulu kakhulu ezinyangeni eziyishumi nambili ezizayo. Ngisho nethuba lokusondela ngisho nokulingana weqa umkhawulo we $ 70 umgqomo. Akumangalisi ukuthi ingomunye wabazuzi abakhulu bokwehla kwemali yaseMelika. Ngobudlelwano obuqonde kakhulu phakathi kwazo zombili izinketho.
Futhi awukwazi ukukhohlwa okungenzeka kwezinye izinto zokusetshenziswa. Ikakhulukazi lezo ezixhumene nokudla okuyinhloko nokuthi ungazinikeza injabulo engaphezu kweyodwa uma uvula izikhundla okwamanje. Kodwa-ke, bazodinga ulwazi olukhulu futhi olunzulu ngezimakethe zabo zezezimali. Ngaphezu kwalokho, kuzodinga ukuthi ukhulise utshalomali lwakho kusuka kumikhiqizo yezezimali ehluke ngokuphelele kunaleyo oyisebenzise kuze kube manje.
Ukusebenza ezimakethe zezezimali
Vele, amathuba amasha akuvulekela ukwenza imali oyongile izuze. Ezinye zizoba ngokujwayelekile noma kancane, kepha ezinye ngokuqinisekile zizoqala ngezindlela ezintsha zokutshala imali. Ukuze ngale ndlela, usesimweni esingcono sokwengeza ukunyakaza emhlabeni wonke wemali. Ngokuya ngezenzo ezilandelayo esikuvezela zona ngezansi.
Kufanele wenze ifayela lakho le- ukulinganisa kokuqala ezimakethe zemali. Umsebenzi wayo uzoba kumazinga angaphezu kokujwayelekile. Yize njalo ngaphansi kwezindlela zokutshala imali ezinesizotha. Njengomphelelisi otshalweni lwakho olujwayelekile ezimakethe zezimali.
I-Los izimakethe ezihlukile kuzoba ezinye zezikhungo lapho kufanele ubheke khona ukubeka imali yakho. Uneziphakamiso ezanele zokwanelisa isidingo sakho, ngisho nakwezimpahla zezimali eziyinqaba ezingabonakala kuwe okwamanje.
Ukuqhubeka kwehle ngentengo yedola laseMelika kufanele kwenze shintsha iphothifoliyo kwezinye izindlela ezahlukahlukene. Kuze kube seqophelweni lokuthi kufanele ushintshe lonke utshalomali obenalo kuze kube manje.
Kwezinye izimali zokutshala imali, nokuvikela utshalomali lwakho, akukho okunye ongakwenza ngaphandle kwalokhu vala imisebenzi yakho ngemali enenkontileka, kulokhu i-euro. Kuyisu elisebenza kahle kakhulu kulezi zikhathi.
Qaphela kakhulu nge imikhiqizo yezimali eyinkimbinkimbi. Kufanele wazi ukuthi ungasebenza kanjani nabo esimweni esikhethekile njengalesi, nedola lilungisa ngokuqhubekayo izikhundla zalo. Kuphela uma unolwazi lapho ungavula khona izikhundla kulezi zinhlobo zokonga.
Ngeke ube nokunye ongakwenza ngaphandle kokubheka amafa ezezimali lokho bacashunwe kumadola noma ama-euro. Ngoba ngokuya ngokuhlukahluka okubalulekile, bazothambekela ngokwengeziwe ekwamukeleni inselelo yesidingo sakho esisha. Njengesibonelo salesi simo, izinsimbi eziyigugu zihlala zifakwa kuhlu kowokuqala. Kuzoba yisiginali encane ngalokho okufanele ukwenze ngemali yakho.
Futhi ekugcineni, unganqikazi ukunweba kulezo zimakethe zezezimali lo mkhuba wemali yaseMelika uzuzisa kakhulu. Hhayi labo abasafufusa kuphela, kepha ngisho nabanye ngaphezu kwezikwele ezingaphandle ukuthi kuze kube manje ubungakacabangi ukuwafaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Kuthiwani uma idola liwa kakhulu?
utshalomali igolide noma imali yedijithali yemali yedijithali etshala ukusekelwa ekutshalweni kwezimali kawoyela esikhathini esizayo.
Imali Engcono Kakhulu Yasebhange
Ukutshala imali kumabhondi esifunda: enye indlela yokonga